Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Adkaanshaha jirka (cillad) 1/6000. Isticmaal xajin qallalan oo qallalan oo OMPI ah iyo kala jejebi. Slider wuxuu qaataa wadada laba geesoodka ah ee jihada lix-geesoodka ah, iyo tusaha slider wuxuu qaadanayaa "adkaansho soo noqnoqosho badan" iyo "geedi socodka shiidi tareenka": xirasho hoose, saxnaan sare, waqtiga haynta saxda ah oo dheer, iyo hagaajinta nolosha caaryada. Qalabka loo yaqaan 'crankshaft' wuxuu ka samaysan yahay qalab daawayaal ah oo aad u sarreeya oo 42CrMo ah, kaasoo 1.3 jeer ka xoog badan 45 bir oo leh nolol adeeg dheer. The ...
Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Adkaanshaha jirka (cillad) 1/6000. Isticmaal bareeg xajin xajin pneumatic ah, ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, buuq yar, nolol dheer. Slider wuxuu qaataa wadada laba geesoodka ah ee jihada lix-geesoodka ah, iyo tusaha slider wuxuu qaadanayaa "adkaansho soo noqnoqota badan" iyo "geedi socodka shiidi tareenka": xirasho hoose, saxnaan sare, waqtiga haynta saxda ah oo dheer, iyo hagaajinta nolosha caaryada. Qalabka loo yaqaan 'crankshaft' wuxuu ka samaysan yahay qalab daaweyn xoog leh leh oo 42CrMo ah, oo ah 1.3 jeer str ...
Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Adkaanshaha jirka (cillad) 1/6000. Isticmaal xajin qallalan oo qallalan oo OMPI ah iyo kala jejebi. Slider wuxuu qaataa wadada laba geesoodka ah ee jihada lix-geesoodka ah, iyo tusaha slider wuxuu qaataa "daminta-soo-noqnoqda badan" iyo "geedi socodka shiidi tareenka", oo leh duug hoose, saxnaan sare, waqtiga haynta saxnaanta dheer iyo nolosha caaryada oo hagaagtay. Qalabka loo yaqaan 'crankshaft' wuxuu ka samaysan yahay qalab daawayaal ah oo aad u sarreeya oo 42CrMo ah, kaasoo 1.3 jeer ka xoog badan 45 bir oo leh nolol adeeg dheer. T ...
Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Qalafsanaanta jirka (cillad) 1/8000: cillad yar iyo saxnaansho waqti dheer ah. Isticmaal bareeg xajin xajin pneumatic ah, ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, buuq yar, nolol dheer. Slider wuxuu qaataa dariiqa jihada afar gees iyo sideed geesood ah, kaas oo qaadi kara culeys weyn oo dabacsan si loo hubiyo muddada dheer iyo xasilloonida dayactirka saxnaanta shaabadda. Jidka tareenka iskuxiraha wuxuu qaataa "deminta soo noqnoqda badan" iyo "geedi socodka shiidi tareenka" ...
Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Fuselage-ku wuxuu leeyahay qalafsanaan heer sare ah (cillad) 1/15000, cillad yar, waqtiga haynta saxnaanta oo dheer, saxsanaanta alaabooyinka shaabbadda, dib u soo kabashada yar yar, waxayna qaadi kartaa culeysyo waaweyn oo dabacsan. Isticmaal bareeg xajin xajin pneumatic ah, ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, buuq yar, nolol dheer. Slider wuxuu qaadanayaa dariiqa jihada afar gees iyo sideed geesood ah, kaas oo qaadi kara culeys weyn oo dabacsan: si loo hubiyo muddada dheer iyo xasilloonida dayactirka stampin ...
Astaamaha waxqabadka ugu muhiimsan: Adkaanshaha (cillad) jirka iyo slider 1/8000: cillad yar iyo saxnaansho waqti dheer ah. Isticmaal bareeg xajin xajin ah oo qoyaan leh (nooca isku dhafan): ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, buuq yar, nolol dheer. Slider wuxuu qaataa dariiqa jihada afar gees iyo sideed geesood ah, kaas oo qaadi kara culeys weyn oo dabacsan si loo hubiyo muddada dheer iyo xasilloonida dayactirka saxnaanta shaabadda. Xadiidka tareenka ee loo yaqaan "Slider guide train" wuxuu qaataa "daminta-shirarka badan"
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee waxqabadka: Qaab dhismeedka fuselage wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood (kursiga sare + jaangooyada dhexe ee jirka + saldhigga), baarka xoojinta waxaa loo isticmaalaa isku xirnaanta qufulka adag. Qalafsanaan sare (isbeddel) 1/9000 oo ah fuselage iyo block slide: cillad yar iyo waqtiga haynta saxda ah ee dheer. Biriigga qaboojiyaha qoyan ee pneumatic (nooca isku dhafan) waxaa loo isticmaalaa cadaadisyada ka hooseeya 600 tan, iyo kala jejebka qalalan (nooca kala jaban) waxaa loo isticmaalaa cadaadiska ka sarreeya 800 tan. Boodhka iskeelka ayaa korsaday afar gees iyo eig ...
Astaamaha waxqabadka ugu weyn mid: Qaadashada qaabdhismeedka jirka ee xoogga badan, cilladaha yaryar iyo saxsanaanta Gawaarida waxay qaadataa wadada hage ee laba-geesoodka ah ee laba-geesoodka ah, iyo tusaha slider wuxuu qaataa "deminta-soo-noqnoqda sare" iyo "geedi socodka shiidi tareenka": xirnaan hoose, saxsanaanta sare, waqtiga haynta saxnaanta dheer, iyo nolosha caaryada oo hagaagtay. Qalabka loo yaqaan 'crankshaft' wuxuu ka samaysan yahay qalab daawayaal ah oo aad u sarreeya oo 42CrMo ah, kaasoo 1.3 jeer ka xoog badan 45 bir oo leh nolol adeeg dheer. Naxaas ...